“Waxaan jeclaan lahaa inaan dhex galo Maskaxda Messi si aan u ogaado sida…”. Pep Guardiola – Gool FM
(Catalonia) 08 Juunyo 2017. Pep Guardiola ayaa aaminsan in Lionel Messi uu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu hibada badan taariikhda, wuxuuna jeclaan lahaa inuu dhex galo Maskaxdiisa si uu u ogaado sida uu ula tacaala ama u xamilo cadaadiska badan ee saaran.
Tababaraha Man City ayaa saddex jeer La Liga iyo labo jeer Champions League kula soo guuleystay Barcelona iyo Messi sanadihii u dhexeeyay 2008 ilaa 2012.
Messi ayaa la warinayaa inuu ku dhow yahay inuu qalinka ku duugo heshiis dheer uu ku sii joogayo gegada Camp Nou, Guardiola ayaana yiri in sida uu xiddiga reer Argentina ula tacaalo heerka sare ee markasta laga filayo ay ka mid dhigtay mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican taariikhda.
“Waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu mudnaanta badan uguna hibada badan taariikhda,” Guardiola ayaa sidaa u sheegay Catalunya Radio .
“Waxaan jeclaan lahaa inaan dhex galo maskaxdiisa si aan u ogaado sida uu ula tacaalo cadaadiska saaran, iyadoo ay dusha u wada saaran yihiin Barcelona iyo xulka Argentina.
“Adduunka oo idil waxay ka filanayaan inuu kulan kasta dhaliyo saddex gool uuna caawiyo saddex kale. Ciyaartoyda kalena waxay ogyihiin inay heystaan Messi isaga ayayna ku tiirsanaan doonaan.”.